संक्रमणको जोखिममा गंगामाया : भीआइपीको नाममा आइसीयुमा भीड - Nepali Sandes
संक्रमणको जोखिममा गंगामाया : भीआइपीको नाममा आइसीयुमा भीड
काठमाडौं । वीर अस्पतालमा अनशनरत गंगामाया अधिकारीकाे स्वास्थ्य बिग्रिदै गएको छ । गंगामाया बुढो वीरको बुढो आइसीयुमा छिन् । डाक्टरले नै उनलाई संक्रमणको जोखिम रहेको बताईरहेका छन् । अहिले उनको उपचारमा डा. मिनन गोर्खाली संलग्न छन् ।
डा. गोर्खालीले भेट्न आउनेहरुको भीड हट्न पाए हुन्थ्यो भनेका छन् । तर, दलका नेता र अधिकारकर्मीहरु ‘भीआईपी’को नाममा भेट्नलाई आइसीयु कक्षमै पुग्ने गरेका छन् । गंगामायाको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ । त्यसैमाथि बुढो आइसीयु, अनि वीर अस्पताल आफैंमा रोगको पोको ।
डाक्टर भन्छन्, ‘भेट्न आउनेहरुका कारण पनि संक्रमणको जोखिम बढ्छ । भिजिटर समेत रोगका पोका हुन् । जसले जोखिम बढाउँछ ।’ भिजिटर नआईदिए हुन्थ्यो । संक्रमण दोहोरिए ज्यानै जान सक्छ ।
तर, हुल बाँधेर भेट्न आउने भीआईपीहरु घटेका छैनन् । वुधबार मात्रै प्रमुख विपक्षी कांग्रेसको संसदीय दलले गंगामाया अधिकारीलाई भेट्न भनी संस्थागत निर्णयनै गरेर टोली खटायो । त्यसअघि स्वविवेकले भेट्न कांग्रेसका थुप्रै नेताहरु आइसीयु कक्षमा छिरे, भीआईपीको रुपमा ।
गंगामायाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन बुधबार पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव वीर अस्पताल पुगे । उनले गंगामायालाई भेटेरै निस्किए । पछि कांगे्रस नेता चन्द्र भण्डारी, एनपी साउद पुगे । संसदीय दलको निर्णयपछि पार्वता डिसी चौधरी, लक्ष्मी परियार, डा. अमरेशकुमार सिंह, प्रमीला राई, विमला नेपाली, देवप्रसाद तिमिल्सिना र नमिता कुमारी चौधरी भेट्न पुगे ।
रामशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ पनि वीर पुगे । नेता मात्रै होईन, मानवअधिकारकर्मी प्रकाश अर्याल, बाबुराम गिरी र चरण प्रसाइँले पनि गंगामायाको अवस्थाबारे जानकारी लिए । गंगामाया संक्रमणको जोखिममा रहेका बेला किन हुल बाँधरे भेट्न गएको ? जवाफमा मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाँईले भने, ‘गंगामायाको स्वास्थ्य अवस्थाका हिसाबले भीडभाड ठीक होईन । तर, भीआईपीहरुलाई रोक्न सकिने अवस्था रहेन ।’ विगतमा भीआईपीहरु कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? अहिले मण्डलामा प्रदर्शन गर्नै नदिने भएपछि गंगामायाको सेन्टिमेन्ट लिन खोजेको ? प्रसाँईले यो विषयलाई यसरी नबुझ्न भनि जवाफ दिए । उनले अगाडि भने, ‘कांग्रेसले गरेको संस्थागत निर्णय स्वागत योग्य छ । यो सरकारलाई दबाब दिने सन्दर्भमा थप प्रभावकारी हुन्छ । जहाँसम्म तपाईले भनेको शेरबहादुर र प्रचण्ड मिलेर सरकार चलाउँदा सर्वोच्चको आदेश किन कार्यान्वयन भएन । शेरबहादुर किन प्रचण्डको प्रभावमा परे भन्ने कुरा जायज छ । उहाँको असफलता प्रमाणित भइसकेको छ । तर, सुशील कोईराला प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तिम समयमा मुद्दा दर्ता भएको कुरा पनि विर्सनु हुँदैन । अनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नारायणकाजीहरुले हामी अब तपाईलाई निराश बनाउँदैनौँ भनेर गंगामायालाई भनेको कुरा पनि विर्सनु हुँदैन ।’ खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएको हामी नागरिकलाई मन परेको थिएन । तर, मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा यो मुद्दा खोल्न लगाउनु भएको उहाँले नै हो । यो कुरा पनि भुल्नु भएन ।
उनले गंगामायाको आग्रहलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप समेत लगाए । गृहमन्त्रीले संसदमा यो राजीतिक ढंगबाट समाधान हुन्छ भनि बोल्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाई छ । त्यो आपत्तिजनक छ, उनले भनेका छन् ।
गंगामायाको अनशनलाई विषयान्तर किन गरेको ? उनले यो विषयलाई विषयान्तर गरेको भनि परीभाषित गर्न नमिल्ने बताएका छन् । गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारी कान्छो छोरा कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कानुनी कारबाहीको माग राखेर अनशन बसेको धेरै भईसक्यो । कृष्णप्रसादको २०६२ साल जेठ २४ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरेको मुद्दा प्रहरीमा किटानीसहित परेको थियो । यससम्बन्धी मुद्दा चितवन जिल्ला अदालतमा अहिले पनि विचाराधिन छ । अदालत उल्टै सम्पर्क विहिन भएका जेठा छोरा नुरप्रसादको बयान लिन भनि आदेश जारी गर्न पुगेको छ । न्यायका लागि अनशन बसिरहेकै बेला गंगामायाका पति नन्दप्रसादको २०७१ असोजमा वीर अस्पतालको शय्यामा मृत्यु भएको थियो । नन्दप्रसादको शव अहिले पनि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमै छ ।
गंगामायाको अवस्था के छ ?
गंगामायालाई ज्वरो छैन । डा. गोर्खालीले अहिले रक्तचाप सामान्य छ, भनेका छन् । ‘रक्तचाप बढाउने औषधि दिएका थियौं, अहिले रोकेका छौं’, उनले भने । अनशनका कारण रक्तचाप कम भएको थियो । कमजोरीले शरीरमा संक्रमण फैलिएपछि चिकित्सकले एन्टिबायोटिक र रक्तचाप बढाउने औषधि चलाएका थिए । गंगामायालाई कुनै पनि बेला संक्रमणको जोखिम छ ।
सलाइन पानी र औषधिले काम गरेपछि उनी होसमा आएकी छन् । उनलाई अझै केही दिन आइसियूमै राखेर उपचार गरिने बताईएको छ । गणतन्त्र दिवसको दिनबाट निर्जल अनशन बसेकी उनले आइसीयुमा जान मानेकै थिईनन् । पछि, डाक्टर अधिकारकर्मीको पहलमा आइसीयु लगिएको हो, भन्छन् मानवअधिकारकर्मी प्ररण प्रसाँई ।
Thu-Jul-2018, 04:37 am मा प्रकाशित, 283 जनाले हेर्नुभयो
गंगामायाका छोराको हत्यारालाई उन्मुक्ती दिन पाइदैनः डा कोइराला